Hogaaminta DDSI Oo Aan Cidi Kamaqnayn Oo Waaji' Kusugan - Cakaara News
Hogaaminta DDSI Oo Aan Cidi Kamaqnayn Oo Waaji' Kusugan
Jigjiga(CN) Khamiis 10kii September 2015, Hogaaminta xukuumada DDSI oo aan cidi kamaqnayn oo uu hogaaminayo Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo Af-hayeenka Golaha Xildhibaanada ahna Gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq ayaa saaka booqasho gaaban oo khibrad lagaga qaadanayo biyo-xidheeno horay looga sameeyay iyo goob-doorashooyin biyo xidheeno cusub oo hada laga samaynayo isugu jirta kugaadhay qabalaha waaji oo katirsan degmada Jigjiga.
Khibrad wadaag qaatay wakhti kooban oo lagu arkay goobo biyo xidheen oo horay loo sameeyay kadibna waxay hogaaminta ugu saraysa deegaanka oo hor socota hogaaminta 9ka gobol, 68da degmo iyo 4ta maamul-magaalo ay udhaqaaqeen dhanka togga kayimaada qabalaha Xoodh-lay oo dooxada qabalaha waaji kubalaadha. Goobtan oo kamid ah goobaha daraasaadka biyo xidheenada cusub ee deegaanka laga hirgalinayo sanadkan laga soo sameeyay ayaa iyadoo GPS hagayo ladul istaagay.
Waxaa kale oo iyana halkaa la iskula doortay laag wayn oo meel udhaw togaas kasoo daacda in biyaheeda laqabto. Iyadoo goobaha latagayayna ay ahaayeen kuwo lug loogu kala gooshayay. wadatashina laga samaynayay.
Ugu danbayna, heerarka kaladuwan ee hogaaminta DDSI ayaa intii goobtaas lajoogay madaxwaynaha kacodsaday maadaama qorshahani yahay qorshe ku cusub aadna muhiim ugu ah bulshada deegaanka inuu uduceeyo si meel-marintiisu ugu fududaato. Duco gacmaha kor loo wada taagay ayuuna madaxwaynuhu ugu duceeyay.